Juan Mata oo hoos u dhigay heshiis uu ugu dhaqaaqi lahaa dalka Saudi Arabia si uu Kooxdiisa Manchester United… – Gool FM
Juan Mata oo hoos u dhigay heshiis uu ugu dhaqaaqi lahaa dalka Saudi Arabia si uu Kooxdiisa Manchester United…
(Manchester) 13 Okt 2020. Juan Mata ayaa la soo warinayaa inuu iska diiday fursad uu ku aadi lahaa dalka Saudi Arabia, isagoo doonaya inuu koobab kula guuleysto kooxdiisa haatan ee Manchester United.
Wargeyska SPORT ayaa warinaya in laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester United uu hoos u dhigay heshiis uu ugu dhaqaaqi lahaa dalka Saudi Arabia.
Xiddiga reer Spain ayaa dalab 20 milyan oo gini ah oo u dhiganta 26 milyan oo dollar ka helay koox aan la amgacaabin oo ka dhisan dalka Saudi Arabia, laakiin waa uu diiday inkastoo uu galay sanadkiisii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa garoonka Old Trafford.
Mata ayaa door-bidaya inuu sii joogo Man United, iyadoo uu aaminsan yahay inay kooxdu weli u dagaallami karto koobab waa weyn oo dhinacyo badan leh, isla markaana uu laftiisu kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska la qaadi karo koobab kale.
Rodrygo: "Ma doonayo inaan noqdo Neymar-ka cusub"